ME AND MY FEELINGS: 2009
मेरो प्रश्न !!!!!
आफ्नै स्वार्थ मात्रै हेर्ने बानी रोक्न मिल्दैन कि ?
बिरामी ती आमाको भार मिली बोक्न मिल्दैन कि?
एमाले र कांग्रेस भन्छन सरकार हामी चलाऊँछौ !!
मशाल बोकी माओवादी भन्छ सरकार ढलाउँछौ !!
चलाऊने र ढलाउने यो खेल रोक्न मिल्दैन कि ?
एक मधेश एक प्रदेश कुर्लदैछ फोरम पनि !!
बिभेदहरु जन्मदैछन जात, धर्म, क्षेत्र बनी !!
नेपालीमै भाँजो हाल्ने काम रोक्न मिल्दैन कि ?
राप्रपाको उही पारा बाँकी भाका दल नि त्यस्तै!!
सत्ताको नै लोभमा परि यताउती धाउन ब्यस्तै !!
सत्ताको यो लुछाचुँडी अझै रोक्न मिल्दैन कि ?
हामी जनता चेतनशिल किन भन्छौ आँफैलाई !!
मौन नै छौ अझै पनि धेरै चोटि घात पाइ!!!
बुझेर नि अबुझ बन्ने नाटक रोक्न मिल्दैन कि ?
बिरामी ती आमाको भार मिली बोक्न मिल्दैन कि ?
गजल-- आव्हान !!
बिकासको मुल अब फुट्नु पर्छ भन्छु म त !!
गाउँ शहर लेक बेशी जुट्नु पर्छ भन्छु म त !!
कती तोड्छौ भत्किएको घरलाई अझै तिमी,
बन्द हड्ताल पुग्यो अब छुट्नु पर्छ भन्छु म त !!
चुहिने त्यो घरको छानो टाल्नलाई मिलिजुली,
भाईचाराको गिटी पनि,कुट्नु पर्छ भन्छु म त!!
एकताको उदाहरण बनाउन यै देशलाई ,
अनेकताको बाँध अब,टुट्नु पर्छ भन्छु म त !!
राम्रो गरे साथ दिउँ, गलत गरे खबरदारी,
जागरुक भै अब सबै उठ्नु पर्छ भन्छु म त !!
गजल-- तिम्रो कसम!!!!!
टाढा जान्छु भन्छौ बाटो,छेक्ने छैन तिम्रो कसम!!
फेरी तिम्रो मनको दैलो, टेक्ने छैन तिम्रो कसम!!
बाँचिदिन्छु यो जिन्दगी,अन्जान बनी सधैं भरी,
देखे पनि तिमीलाई, देख्ने छैन तिम्रो कसम !!
भावनामा डुबाउला, बहकेला त्यो मन फेरि,
तिम्रो मुटु छुने गजल, लेख्ने छैन तिम्रो कसम!!
रोएको छ यो मन मेरो,तिम्रो पनि उस्तै होला,
आशुले नै तर पीडा, सेक्ने छैन तिम्रो कसम!!
खुशी चाहें दु:ख पाएँ, चेतिसकें अब मैले,
त्यै दल्दलमा फेरी मुटु,फेक्ने छैन तिम्रो कसम !!
कल्पनामा आँफैभित्र मात्तिएकी फूल तिमी !!
भँवराको हुल देखी आत्तिएकी फूल तिमी !!
बैश चढ्यो मात बढ्यो, सुन्दरताले बास पायो !!
चोखो तिम्रो फुलवारीमा, नयाँ मधुमास छायो !!
भरिएको जवानीले, मात्तिएकी फुल तिमी !!
पोखिन्छ कि मिठो रस, आत्तिएकी फूल तिमी !!
रीत न हो, वैली झर्‍यो, मगमगाउँदो फूल पनि !!
बिझायो कि उदासी त्यो, चोट दिने शूल बनी !!
अझै पनि अबुझ बनी, मात्तिएकी फूल तिमी !!
ढल्किएको बैश सम्झी, आत्तिएकी फूल तिमी !!
तिम्रो साथ याद आयो!!!!!!
ठेश लागि लड्न लाग्दा, तिम्रो साथ याद आयो !!
निदरी नै टाढा भाग्दा , तिम्रो साथ याद आयो !!
दिन रात एकै सरी, याद साँची बिताएका ,
आफु सँगै रात जाग्दा, तिम्रो साथ याद आयो !!
साथ हुँदा सयौ कोश, लाग्थ्यो के नै हो र भनी,
दुई पाइलामै आज थाक्दा, तिम्रो साथ याद आयो !!
चन्चले यो मन पनि, बरालिन्छ त्यसै त्यसै ,
भावनाले सिमा नाघ्दा, तिम्रो साथ याद आयो !!
तिमी बिना यो जिन्दगी ,कसरी खै सोच्नु यहाँ,
औशिले नि जुन माग्दा, तिम्रो साथ याद आयो !!
गजल - विकल्प छैन!!!!
तिमी हुनुको विकल्प छैन !!
सम्झी रुनुको विकल्प छैन !!
मानशपटमा छाइ रहने त्यो,
छुनु मुनुको विकल्प छैन!!
भन्थ्यौ साथै हुन्छु हर्दम् ,
मुटु छुनुको विकल्प छैन !!
यादमा बहेका ति आशुले नै,
पिडा धुनुको विकल्प छैन!!
केही टुक्रा टाक्री हरु Part 3
काम उस्तै नाम मात्रै,फेरे देश बन्दैन हजुर !!
मुखले मात्रै संबिधान ,केरे देश बन्दैन हजुर !!
काला गए गोरा आए, आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे,
मुकदर्शक बनी रमिता, हेरे देश बन्दैन हजुर !!
गल्ती हुन्छ मानवबाटै, सुधारेर अघी बढौ !!
ठप्प बिकासका मार्ग, उघारेर अघी बढौ !!
जिन्दाबाद-मुर्दाबाद त्यागी सबै एक बनी-
फर्फराउने झन्डा हाम्रो, उचालेर अघी बढौ!!
केही टुक्रा टाक्री हरु Part 2!!
यो शहरमा खोजे आफ्नो माटो भेटिएन !!
चस्स किन दुख्यो भनी मुटु छामी हेरे ,
एक्लै हिडी बिरानीमा, देश भेट्न सम्भव हुन्न !!
रक्तनदी जती बहाउ ,प्यास मेट्न सम्भव हुन्न!!
एक हातले ताली कतै बजेको सुनेका छौ तिम्ले,
दुई हात नभै सारङ्गिको, तार रेट्न सम्भव हुन्न!!
हरा'को त्यो गाउँको बाटो खोजौ अब मिलीजुली !!
वैमनस्यता त्यागी भाईचारा रोजौ अब मिलिजुली !!
भर पर्यौ सधैं तिन्कै बदलामा बस धोका पायौ,
निमुखा भै कती बस्नु यहाँ सोचौ अब मिलिजुली!!
Posted by Jitendra Malla Labels: टुक्रा टाक्री2comments
केही टुक्रा टाक्री हरु Part 1!!
बाढी मेरो मनमा आउँदा, त्यो तन-मनमा हल्चल देखे !!
चुल्बुले त्यो चुरा कस्तो, हर छन्छनमा हल्चल देखे !!
कस्तो यो नाता हाम्रो, भेउ कुनै पाईन मैले ,
छुरा धस्दा यो मुटुमा, त्यो धड्कनमा हल्चल देखे !!
बन्धन सबै तोडी आउ डर किन मान्छेउ!!
प्रीतको बिउ गोडी आउ डर किन मान्छेउ!!
लक्ष्य हाम्रो एउटै रै'छ बाटो किन फरक,
पाइला यतै मोडी आउ डर किन मान्छेउ!!
Posted by Jitendra Malla Labels: टुक्रा टाक्री3comments
गजल--- यसरी बन्छ गजल
मुटु भरी वेदना ले , आशु झार्दा गजल बन्छ !!
यो मनले त्यो मनमा, डेरा सार्दा गजल बन्छ !!
सुख दु:ख सँगम जीवन, भन्छन भन्ने हरु तर ,
दु:खरुपी तुवाँलोले, सुख बार्दा गजल बन्छ !!
अन्धकारमै हराएर, सारा जीवन जिउँदा जिउँदै,
उजेलिमा रम्ने झिनो, आश मार्दा गजल बन्छ !!
कि त पढि कि त परी , जानिन्छ रे भन्छन यहाँ ,
पिडासङ्गै जीवन अझै, सुनझै खार्दा गजल बन्छ !
जीवन भन्नु जुवा ठानी,खुशी सबै दाउमा राखी,
'जितु'ले नै जिन्दगीको, बाजी हार्दा गजल बन्छ !!
मेरो बाल्यकालको साथी !
"जन्मिदा एक्लै, मर्दा नि एक्लै", ध्रुवसत्य कुरा, तर जिन्दगीको यात्रामा कयन साथहरु साथी बन्छन, कयन हातहरु साथ छोड्छन । यो क्रम चलिरहन्छ, जिन्दगीको यात्रा जो चल्नु छ !! कुनै साथ यस्ता हुन्छन जुन लामो समयसम्म चल्छन तर हामी याद गर्न चाहन्नौ, अनी कुनै यस्ता हुन्छन जुन क्षणिक हुन्छन तर हरपल सम्झनामा आइरहन्छन !!
कथा जस्तो लागे पनि यो कुनै कथा होइन, मेरो भावना अनी त्यो बाल्यकालको साथीको सम्झना हो जुन मेरो मनमा हर्दम आइरहन्छ, मानसपटमा छाइरहन्छ । त्यही सम्झनाहरुलाई त्यन्द्रा त्यान्द्रा बुनेर यो लेख्दैछु !
गाउँले परीबेशमा हुर्किएको म सानोमा सार्है नै लजालु स्वभावको थिए । कसै सँग नि खुलेर कुरा नगर्ने, केवल आफ्नो काममा मात्र ध्यान दिने, बाँकी दुनियाँ बिरानो थियो मेरो लागि ।चार बर्षको हुँदा पनि म स्कुल भनेपछी डराउँथे,घरबाट अंकल ले जती भने नि म कहिल्यै स्कुल गईन रे । एक दिन अंकल ले मलाई काँधमा राखेर स्कुल छोडेर आउनुभएछ, जुन दिन पस्चात मैले एउटा क्लास नि छोडेन रे !! ५ सम्मको मेरो पढाई गाउँकै स्कुलमा भएको हो ।
म त्यतिबेला कक्षा २ मा पढ्थे, मेरै गाउँको स्कुलमा ।त्यतिबेला "प्रभाते स्कुल"(MORNING SCHOOL) चल्दै थियो ! प्रभाते स्कुल बिहान ७ बजे सुरु हुन्थ्यो र १ बजे सकिन्थ्यो जुन हामी एकदमै मन पराउँथ्यौ, DAY SCHOOL को तुलनामा । हामीहरु BREAK TIME को लागि 'अन्नी'(TIFFIN) लगेर जान्थ्यौ घर बाटै।
एक दिन एक जना नयाँ मान्छे हाम्रो क्लासमा आयो, मैले ज्यादा ध्यान दिएन, किन मैले कारण माथि नै लेखिसकेको छु । अरुले कुरा गरेको सुन्दा खेरी उ OVERSEER को छोरा भएको थाहा पाए, त्यो OVERSEER हाम्रो गाउँमा बन्न लागेको सिचाइ नहरको कामले केही दिनका लागि मेरो गाउँको पाहुना रहेछ । BREAK TIME भयो र म पनि सबै झै आफ्नो 'अन्नी'तिर लागे, मुवाको हातबाट बनेको मीठो रोटी । एक जना साथी जहिले पनि म संगै नास्ता गर्थ्यो किनकी मेरो 'अन्नी' उस्को तुलनामा जहिले नि मिठो हुने गर्थ्यो । त्यो दिन त्यो नयाँ साथी हामी भए तिरै आयो शायद साथ खोजिरहेको थियो । उस्ले पनि TIFFIN बोकेको थियो जुन हाम्रो भन्दा नि राम्रो थियो। आफ्नो TIFFIN बाट केही मलाई दियो उस्ले र भन्यो "आजदेखी हामी साथी साथी है !" म संगै भएको साथीले 'हुन्छ भन' भनेर भन्यो, जस्मा उस्को स्वार्थ लुकेको थियो, राम्रो TIFFIN पाउने । तर म मुकदर्शक भएर उभिरहे, बोली फुट्नु भन्दा अघी नै क्लास सुरुको जनाउ घन्टी बज्यो, दगुरियो क्लास तिरै।
अर्को दिन मैले उस्लाई खोजे, किनकी मलाई उस्को प्रश्नको जवाफ दिनु थियो, उ सँग दिगो मित्रताको साईनो गास्नु थियो। मेरो खोजाइ ब्यर्थ भयो किनकी उ त्यसपछी मेरो स्कुलमा कहिल्यै देखिएन, भेटिएन ।
यती धेरै बर्ष बितिसकेका छन, समयले लामो फड्को मारिसकेको छ । उ कता छ मलाई केही थाहा छैन, उस्लाई यो कुरा याद छ कि छैन भन्ने नि मेसो छैन मलाई । तर पनि उस्का ती निस्चल शब्दहरु अझै नि कानमा गुन्जिरहन्छन । उस्को त्यो साथीत्व हर घडी याद आउँछ ।
करीब ३० जना मध्य उस्ले मेरो साथ नै किन चुन्यो, यस्को जवाफ म सँग छैन, तर आज म उस्लाई जवाफ दिन चाहन्छु दुनियाँलाई साक्षी मानेर , "हुन्छ !! हामी साथी साथी, युगौ युग सम्म लाई!!"
जन्म दियौ प्यारी आमा, कर्म दियौ बाबा तिम्ले!!
सुख सुम्पी हामीलाई, दु:ख लियौ बाबा तिम्ले!!
गार्हो हुन्छ सुख लत्याई, सधैँ दु:ख अँगाल्नलाई,
पीडा भुली हाँसी हाँसी, आँशु पियौ बाबा तिम्ले!!
जिन्दगीको यात्रा सहज, बनाउन सन्ततिको,
फुल रोप्न बाटैभरी, नङ्ग्रा खियौ बाबा तिम्ले!!
ठुला ठुला सपना र, आशाहरु सजाएर,
पहिल्याउनु सुमार्ग नै, भन्या' थियौ बाबा तिम्ले!!
सेवा गर्छु बाबा आमा, ऋणी भएँ युगौसम्म,
ज्युँनु जति यहाँ दुखी, जीवन जियौ बाबा तिम्ले!!
((आफ्नो सन्तानको खुशीको लागि दिनोरात खट्ने सम्पूर्ण मातापिताहरु प्रती समर्पित यो गजल !!!))
फेसबूक दोहोरी !!
नआओस है भन्दा पनि फेरी साउने झरी आयो!!
अशुभ त्यो सन्देश बोकी रुँदै एउटा चरी आयो !!
हुलाकी त्यो परेवा नै रक्तरन्जित देख्दा साथी,
एकादेशको शान्तीक्षेत्र याद घरी घरी आयो !!
भाई भाई फुटी टुक्राएछन मेरो प्यारो देश,
देखेर त्यो दशा अनि आँशु गह भरी आयो !!
भाई फुट्दा गवाँर लुट्छन सुनेको थे कतै,
हेर छिमेकीको सीमा घरभित्रै सरी आयो !!
कस्तो थियो कस्तो भयो यही सोच्दा सोच्दै,
मन भित्र तानाबाना आज नाना थरी आयो !!
हत्या अपहरण बन्द झनै बढेको छ सुने,
कुन पापिको श्राप हजुर यै देशमा परी आयो !!
नेपाल आमा माया तिम्रो अगाध छ छातिभित्र,
झझल्को मा लालुपाते जाई सुनाखरी आयो !!
कती ताक्नु अरुको मुख आँफै केही गर्नुपर्छ,
मुहार तिम्रो फेर्ने अठोट तिम्रै छोरो गरी आयो !!
Posted by Jitendra Malla Labels: गजल दोहोरी2comments
फेसबूकको अर्को तेहेरी !!
Pradeep Chapagain :
एउटा फूल आँखा अघी मन चोर्दै आयो आज !!
भुल्छु भन्दा भन्दै पनि मीठो साईनो लायो आज !!
झझल्को त्यो कस्तो रैछ मनमस्तिस्क बरालिने,
कस्को मुहार मानसपटमा भन तिम्रो छायो आज !!
कस्तो कस्तो छाँया बनी नाचिदिन्छ वरिपरि,
तृस्णा मिठो यो मनले साथी नयाँ पायो आज !!
तिम्रो साथ चैत मासको वसन्तमा झैँ लाग्यो,
कुहु कुहु कोइली चरी रन बन गायो आज ।।
कोइली गाउँदा शुवास छाउँदा आभाश छ उन्कै,
त्यै मुहारको कल्पनामा यो साथी रमायो आज!!
प्रकृति ले जिस्काउंछे छ्ट्पटी यो मेरो हेरी,
अनौठो त्यै तिर्सनाले भोक निन्द्रा खायो आज !!
भोक निन्द्रा भाग्यो भन्छौ कल्पनामै रमाउँछौ,
लाग्छ साथी तिमीलाई प्रेमरोग समायो आज!!
थाहा छैन रोग नै हो कि खै के पो हो साथि,
जे भएनी होस हवास सबै मेरो हरायो आज!!
प्रेम रोग को ओखती त पियारि नै खास रैछ,
तस्विर उन्को दिलमा टासी मलम लगायो आज ।।
सँगम उनै प्रियासँग उत्तम ओखती मेरो ठहर,
जस्को मुहार मन्मन्दिरमा तिमीले सजायो आज !!
लाख तपस्या गरिकन स्वप्नपरी सामु पाउँदा ,
बेहोसी ती सबै साथी दिलले मन परायो आज !!
फेसबूक को रमाइलो गन्थन !!
सिमसिम पानी कान्छी नानी चुलबुले छ बानी उन्को!!
त्यै मुहारमा मन यो झुम्यो जानी नजानी उन्को !!
धेरै छन यो खेत गोड्ने,रोपहार चाहिदैन भन्छिन,
पछी लागेउ ब्यर्थै साथी कुरा नमानी उन्को !!
फूल हुन उनी भवरा त त्यसै पछी लाग्छन,
एउटा भवरा अरु थप्यो रुपकी खानि उन्को !!
सर्लक्क जिउ आहा नागबेली केश राम्रो,
यो मुटुमा राज गरिन क्या छ जवानी उन्को !!
सुनेकी छु अप्सरा हौ ,सौन्दर्यकी अपार खानि
बन्न चाहन्छु म पनि आँखाको नानी उन्को !
रुपकी त धनी नै हुन मैले पनि मानेकै हुँ,
तर सुने ठीक छैन साथी आनी बानी उन्को !!
सुनाएछ कस्ले तिम्लाई नभएको कुरा साथि,
मात्र माया गर्छिन मलाई मन सार्है दानी उन्को !!
भ्रममा रैछौ साथी तिमी मायाजालमै पारीछिन्
सब्लाई था'छ बिगतको तितो कहानी उन्को !!
प्रेममा हराइथिन ती नानी भला जानी नजानी,
साछि छन् आँशुले भिजेका ति सिरानि उन्को ।।
सारा सपना धितो राखी उनैमा भर परेका छौ,
टुट्दा सपना झस्केलाउनी नाम सुन्दानी उन्को!!
जसले जे सुनाएनी कान्छी नै मलाई प्यारो,
मेरै माया गोडमेल गर्नु खेती किसानी उन्को !!
Posted by Jitendra Malla0comments
'नयाँ नेपाल' र 'गणतन्त्र'
निर्दोश जनको रक्तनदी,
बहन यदि रुक्दैन भने !
चुलिएको अपराधको शिर,
कानूनसामु झुक्दैन भने!
दुखी मेरा आफन्तको,
आँशु यदि सुक्दैन भने!
पुरानोमै खुशी थिएँ,
'नयाँ नेपाल' चाहिदैन!
जन मर्म कुल्ची हिंड्ने,
कुर्सी मोहमा फस्छन् भने !
श्रीखण्डको आडमा पालीई,
बिशालु भई डस्छन् भने !
अघिल्तिर मिठो बोली,
पिठ्युमा छुरा धस्छन् भने !
हरेक साँझ कोइली वनमा,
विरह गीत गाउँछ भने !
हत्या, हिंसा, बन्द हड्ताल,
अझै प्रशय पाउँछ भने !!
अशान्तिको त्रास अझै,
हर धड्कनमा छाउँछ भने!
नेटो यदि काट्दैनन् भने !
जंगे पिल्लर वरै सर्दा,
बोल्न कोही आँट्दैनन् भने !
एउटै घरका दाजुभाई,
प्रेम सद्भाव साट्दैनन् भने!
तेरो मेरो हैन हाम्रो,
हर नेपाली सोच्दैन भने !
बिखन्डनमा डोरिंदा देश,
अखन्डता रोज्दैन भने !
विकास ठप्प देख्दा देख्दै,
विकल्प केइ खोज्दैन भने !
मेची दुख्दा महाकाली,
सुसाएर रुन्न भने ।
हिमाल रुँदा तराई पहाड,
कसैको मन छुन्न भने ।
नेपालीको सन्तान भन्दा,
छाती ठुलो हुन्न भने ।
म यो जाति तँ त्यो जाति,
मेरो साथी सोच्छ भने ।
टुक्रिएको नेपाल भित्र,
आफ्नो राज्य खोज्छ भने ।
भाईचाराको कुम्लो फाली,
दुश्मनिको भारी बोक्छ भने ।
Posted by Jitendra Malla Labels: कविता6comments
एउटा भिन्न प्रयास !!
हरियो चुरा मिठो छुरा मुटुभित्र धस्ने को हौ !!
रातो सारी मन उघारी सुटुक्क लौ पस्ने को हौ !!
त्यसै सुन्दर तिमी सानी मिथ्या श्रिंगार किन,
सुन्को बाली ओठ्मा लाली लोभ्याउन घस्ने को हौ!!
थाहा छैन किन तिम्लाई मेरै गाउँ प्यारो लाग्यो,
रेशमी केश परीको देश छाडि यतै खस्ने को हौ !!
भेट्या थे'न आज सम्म मनमहल सजाउने कोइ,
रुपकी रानी प्रेमकी खानि यो दिलैमा बस्ने को हौ!!
उराठलाग्दो यो जीवनमा प्रेमिल मधुमास ल्याइ,
मुहार गोरो प्रितको डोरो 'जितु'सँग कस्ने को हौ!!
तिम्रै नाममा !!!
केही लेख्न मन लाग्यो आज तिम्रो नाममा !!
खबर कस्ले पुर्याउला तिमी बस्ने ठाममा !!
भावना यी बाढी बनी उर्लिन्छन यो मनमा,
पोखेर ती मनका कुरा राखे बन्द खाममा!!
नशा यो कस्तो तिम्रो लठ्ठै बनायो मलाई,
भेटे छैन यस्तो मात मैले पिउने जाममा!!
तिमी पाए पुग्छ मलाई अरु केही चाहिदैन,
भाकेको छु तिम्रै नाम भेटे जती थाममा !!
Posted by Jitendra Malla Labels: गजल7comments
Posted by Jitendra Malla Labels: PHOTOS4comments
मनको ढोका खोलेको छु, आउने कोइ छ कि !!
जुगौ जुगको चोखो माया, लाउने कोइ छ कि !!
कती ज्युँनु विरहमा, यहाँ पीडा लुकाइ ,
सँगै मिली प्रितीका गीत, गाउने कोइ छ कि !!
वेदनाको सागर हो यो, दुई दिने चोला,
खुशी बनी यो जीवनमा, छाउने कोइ छ कि !!
बरालिन्छ यो मन सधैं, के के खोज्छ कुन्नी,
मेरो माया आफ्नो मनमा, सजाउने कोइ छ कि !!
दागबत्ती कुरिरा'को, चिता भयो जीवन,
अमृत छरी यही लाश, ब्युँताउने कोइ छ कि !!
जिन्दगी को गोरेटोमा अनायासै हराइ रहे
दु:खको बाटो रोजे हर्दम् सुख पर सराई रहे
कठीन पलमा साथ दिनु धर्म आफ्नो सम्झी
आफु डुबे अरु लाई खोला पारी तराइ रहे
मुर्खता थियो मेरो अरुको लागी राम्रो सोच्नु
अरुलाई माथि पार्न आफु लाई झराइ रहे
स्वार्थी यो दुनियाँमा भेटिन कोइ दु:ख पर्दा
आफन्तको नजरमा विडम्बना पराई रहे
निरासाको जिन्दगी जिउनु गार्हो हुंदो रै'छ
रित्तिएको मुटु पनि आसले नै भराइ रहे
मैले सोचेको मेरो देशमा हत्या हिंसा हुन्न साथी
मैले खोजेको मेरो देशमा कोही आमा रुन्न साथी
कोइलिको मिठो गीत गुन्जिन्छ बनैभरी मनैभरी
मैले रोजेको मेरो देशमा अशान्ती ले छुन्न साथी
गिद्दे नजर राख्ने हरु होसियार भई बस्नु तिमी
मैले सोचेको मेरो देशमा पाउन्न जालो बुन्न साथी
एकताको उदाहरण बनी यो चिनिने छ दुनियाँमा
मैले खोजेको मेरो देशमा कुनै फाटो हुन्न साथी
हिमाल पहाड तराई मेरो क्षेत्रियताको बिभेद हुन्न
मैले सोचेको 'नेपाल'को थाले स्वप्न उन्न साथी
Jiten: घर नगिचैको बरको त्यो रुख ढलेको देखे
सपनिमा हिजो आफ्नै चिता जलेको देखे
Pradeep:किन यस्तो निरासाको भुमरिमा साथी तिमी
हतास भई आज तिमी आँफै भित्र गलेको देखे
Jiten: विरक्तिन्छु साथी म घरको त्यो स्थिती देखी
सुन्दर मेरो फुलबारिमा बिशालु फल फलेको देखे
Ravi: इमान् जमान् मरिसक्यो धर्म भ्रस्ट भएपछि
बेइमानीको त कालो बजार नै चलेको देखें ।।
Jiten: खोक्छन अझै देश जनताको लागि लड्दै छौ
राष्ट्रभक्तिको खोक्रो चन्दन तिनैले नै दलेको देखे
Pradeep: आफ्नै सन्तानले आगो लगाए विवशतामा रुन्छिन्
भित्र भित्रै नेपाल आमा डढेलो सरि बलेको देखेँ !
Jiten: चुनिनु अघी ठुला ठुला आश्वासन दिने यिनले
छेपारो झै रङ फेरी जनता अझै छलेको देखे
Ravi: स्वार्थ आफ्नो सोझ्याएर महल ठडाउन भ्याए,
रगतको भेल तेल सरी नेपालीलाई मलेको देखेँ !
Jiten: कुकुरको पुच्छर १२ बर्षमा नि बाङगै हुन्छ था'छ
अझै धुलो छर्न "जन सर्वोच्चता' ओकलेको देखे
मन त छैन बिदेशमा, खुन पसिना बगाउने !
आफ्नो घर उजाड राखी, पराइ महल सजाउने !
आफन्त म खोजुँ कहाँ, पराईहरु माझबाट,
भेटिएन कोही पनि, मनको मीत लगाउने !
धेरै भयो स्वदेशबाट, खबर केही आ'को छैन,
सुनाउ साथी केही शब्द, देशको माया जगाउने !
बाध्यताले आफ्नो माटो, छोडी आएँ पराइ मुलुक,
दिन गन्दै बसेको छु, आफ्नै ठाउँ फर्काउने !
आफ्नै भाई निर्ममताले मारेर के पायौ
दु:खको भारी जनता माथि सारेर के पायौ
खुशी होलाउ आज तिमी सत्ताको मातमा
देखावटी खोक्रो जीत हारेर के पायौ
आश्वासन चर्का भाषण सत्ता पुग्ने सिढी थिय
बिकासको मार्ग पर सारेर के पायौ
भाईचारा भन्ने शब्द एकदेशमा सिमित रह्यो
भाई भाई बीचको नाता बारेर के पायौ
भन्थ्यौ तिमी यो देशलाई स्वर्गसरी बनाउनेछौ
स्वर्ग थियो नर्क तिम्ले पारेर के पायौ
शान्ती कैले आउँछ भनी अन्योलमा छ जीवन
संविधान लेखने मिती टारेर के पायौ
वैलिएको फूल हुँ म, सुवास कहाँ छर्न सक्छु ।
एकफेर त मरी सकें, फेरी कहाँ मर्न सक्छु ।
माया बिना रित्तिएको, धेरै भयो मेरो मुटु
महँगो रे सुने जब, सोचें कहाँ भर्न सक्छु
सुखमा त साथ दिने, साथी भेटें कति कति
जीवन तर दु:खसागर, एक्लै कहाँ तर्न सक्छु
छोटो जीवन लामो यात्रा, धेरै भोगें धेरै देखें
आत्मिय हुँ भन्छौ तिमी, भर कहाँ पर्न सक्छु
भयो अब चाहिदैन यो शहरको बसाईँ पुग्यो
क्षितिजपारी त्यो गाउँमा, डेरा कहाँ सर्न सक्छु ।
धेरै भयो तिम्रो पाउ छुन पा'को छैन आमा ।
दु:ख पर्दा मन खोली रुन पा'को छैन आमा ।
भोको पेट लामो रात, निदरिले छोडिन् साथ,
जिन्दगी यो अलिनो भो, नून पा'को छैन आमा ।
मर्दा रुने पर्दा जुट्ने, आफ्ना मेरा छुटे गाउँमै,
यो शहरमा आफ्नो कुनै, खून पा'को छैन आमा ।
भन्थ्यौ तिमी बैगुनिलाई, गुनले नै मार्नु पर्छ,
बदलामा गुनको यहाँ, गुन पा'को छैन आमा ।
छल्किएका नयनहरु, रित्त्याइदिन्थे सक्ने भएँ,
आँशुले यी पीडा मेरा, धुन पा'को छैन आमा ।
धेरै भयो तिम्रो पाउ छुन पा'को छैन आमा !!
दु:ख पर्दा मन खोली रुन पा'को छैन आमा !!
खाने पिउने ठेगान् छैन, सुत्ने झनै भर हुन्न,
आँशु मिच्छु खानासित,नुन पा'को छैन आमा !!
मर्दा पर्दा साथ दिने आफ्ना मेरा त्यही नै छन,
आफ्नो भन्ने यहाँ कुनै,खुन पा'को छैन आमा!!
भन्थ्यौ तिमी बैगुनीलाई गुनले नै मार्नु पर्छ,
बदलामा गुनको यहाँ,गुन पा'को छैन आमा!!
फुल फुल्छ बगैचामा, आँशु घुल्छ वेदनामा,
आँशुले नै पीडा सबै, धुन पा'को छैन आमा!!
गुम्सिएका मनका भाव, पोखेर यो गजल लेखें !
तिम्रो माया यो छातीमा, रोपेर यो गजल लेखें !
चाह छैन मन्दिर-मस्जिद, चहारेर बस्ने मलाई,
मेरी आमा तिम्रै पाउ, ढोगेर यो गजल लेखें !
मेरो लागि कति दु:ख सहेकी छौ मलाई था'छ,
के सकुँला ऋण तिर्न ? सोचेर यो गजल लेखें !
सम्झन्छु म पुराना दिन, रसाउँछन् यी आँखाहरु,
परेलिको डिलमा बाँध, बाँधेर यो गजल लेखें !
तिमी छैनौ ब्यर्थ छन् यी, दुनियाँका खुशी सारा,
तिम्रै नाम तिम्रै मन्त्र, जपेर यो गजल लेखें !
देखे जून आज फेरी तिम्रो रुपको झल्को आयो
याद सँगै बिताएका ति मधुर पलको आयो
फुलबारिमा फलेका छन फल मन लोभ्याउने
मानसपटमा तर मुहार त्यै मेरै फलको आयो
मिलन हुँदा खुशी हुने बिछोडको दु:ख अर्कै
हाम्लाई टाढा बनाउने खेद दैव छलको आयो
कस्तो थियो साथ तिम्रो रमाईला ति दिन थिए
जीवन यो उराठलाग्दो मन्मा आजकलको आयो
बिछोडको वेदनालाई रोएर नै टारेकी थ्यौ
सम्झना बिछोडिदा बहेका अश्रु भलको आयो
अधुरो सपना नयाँ नेपालको
निर्दोश यी नयनमा धुलो छर्ने,
परीचित तिनै अनुहारहरु ।
चाहेर नि भुल्न सक्दिन म,
आमा बेच्ने ति दुराचारहरु ।
हाम्रै रगत र पसिनामा
ठड्याईएका भब्य महलहरु ।
बिकासको नाममा गरिएका,
भ्रमवाहक पहलहरु ।
आज मेरा सामु लोकतन्त्रको भाषण ओकल्दैछन्,
र त अधुरो लाग्छ मेरो सपना नयाँ नेपालको ।
हिजो सम्म 'आतंककारी' कहलाएर,
टाउकोको मोल भिरेकाहरु ।
१२ बर्शे जंगल शयरपछी,
थकाई मार्न महल छिरेकाहरु ।
हाम्रो रगतको होली खेल्ने,
घिन लाग्दा ति हातहरु
बिनाकसूर आफन्त अपहरित हुँदा,
सन्त्रासमा बिताएका रातहरु ।
आज फेरी मलाई गणतन्त्रको नारा रटाउँदैछन्,
मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पीईएकाहरु,
कुर्सी तानातानको नाटकमा फसेपछी ।
सत्ताको मोहमा जंगली ब्वाँसाहरु,
र्‍याल चुहाउँदै संसद पसेपछी ।
खबरदार अझै बिशालु सर्पहरु,
नयाँ चाल चाल्न सक्छन ।
मौलाउन लागेको लोकतन्त्र,
फुल्न नदीई ढाल्न सक्छन ।
तैपनी अझै कसैमा चेतनाको घाम लाग्दैन,
पहाड तराई हिमाल जहाँ रहेपनी,
हामी नेपाली हौं हाम्रो नेपाल ।
पुर्खाको नासो, रगत पसिनाले सिंचेको माटो,
सानो छैन बिबिधता छन् बिशाल ।
शहीदहरुको बलिदान पुर्खाको नासो,
खेर नजाओस प्रण गरौ ।
अनेक जातजाती, सुन्दर यो फुलबारी,
आउ मिलिजुली मलजल भरौ ।
भन्नेहरुको बोली खेर जान्छ, कसैले सुन्दैनन्,
र त अधुरो लाग्छ मेरो सपना नयाँ नेपालको